New Doc Trailer Drops For 'Snapper' A Na-egbu Egwu Movie ị hụtụbeghị
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ New Doc Trailer Drops For 'Snapper' A Na-egbu Egwu Movie ị hụtụbeghị
Akụkọ Ntụrụndụ ụjọIhe nkiri (nkiri)
edere ya Timothy Rawles April 19, 2021
Onye edemede John Campopiano na-anọdụ na ntakịrị akụkọ ihe egwu Ọhụrụ ya dị mkpụmkpụ doc Snapper: Ihe Nkiri Na-eri Nkpu nke Nwoke Na-emebeghị. Anyị nwere ụgbọala na-adọkpụ maka gị n'okpuru.
80s bụ ezigbo oge ịbụ onye na-atụ ụjọ na onye na-eme ihe nkiri na-eto eto. Ọ bụ afọ iri nyere anyị Ndi Ajọ Ọnwụ, CHUD, na a Blob remake.
Ná ngwụcha ngwụsị nke afọ iri ahụ na mmalite nke ihe nkiri egwu egwu egwu egwu 90s bidoro ịmalite ịmalite nnukwu mmefu ego ma ọ bụ opekata mpe ha ele anya n'ụzọ ahụ.
Ka ọ dị ugbu a, otu obere ndị na-emepụta ihe nkiri ọwụwa ugwu ọwụwa anyanwụ bụ Mike Savino na Mark Veau nọ na-arụsi ọrụ ike na ihe ọrụ ebube ha kpọrọ Nri ihe a (nọnyere m) mbe na-eri nri mmadụ. Mana dị ka ọ dị na ọtụtụ mmefu ego dị ala, enwere ọtụtụ nsogbu n'ụzọ.
Nke a Campopiano dị mkpụmkpụ, dị ka ọ dị n'ọtụtụ fim ya, miri emi abanye n'ime Nri na ihe niile gaara abụ. Ihe ndekọ ndị ọzọ dị ka Pennywise: Akụkọ nke ya na Ihe omuma na ihe omuma: Uzo nke Pet Sematary ndi obodo toro gi.
ma Nri abụghị akụkọ banyere ihe ịga nke ọma na fim e wepụtara. Ọ bụ maka usoro ịme ihe nkiri kwụụrụ onwe ya n'enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị nrọ, njikọta nwere ọgụgụ isi na obere obi obi. Ndị na-eme ihe nkiri na ndị na-atụ ụjọ kwesịrị ịhapụ otu a.
Scott Andrews, nke a maara n'oge ahụ dị ka "Master Monster Maker nke Massachusetts," ọbụna nyere aka zụlite okike ahụ.
Site na mmetụta dị irè, pyrotechnics, na ezigbo oge ụgbọ ala, ọ bụ ihe ịtụnanya mere eji hapụ ihe nkiri egwu a n'ime. Ma eleghị anya, ọ ka nwere olileanya maka ya.
Snapper: Ihe Nkiri Na-eri Nkpu nke Nwoke Na-emebeghị ga-adị njikere ịgbazite / iyi site na Coolidge Nkuku aterlọ ihe nkiri nke Virtual echetakwa Room si Fraịdee, Eprel 23 - Tọzdee, Eprel 29.
Tiketi na-ere na Mọnde, Eprel 19 EBE A. Coolidge abụrụla ụlọ dị ogologo oge maka arthouse na sinima indie na mpaghara Boston, Campopiano kwuru na ọ na-asọpụrụ na ọ ga-egwu ebe ahụ.
Ọzọkwa, lezienụ anya maka akwụkwọ a na ememe nkiri na ebe niile.
Isi ihe osise sitere n'aka Mike Savino, Mark Veau, na John Campopiano.
John CampopianoAkara VeauMike SavinoNri
Ihe ijuanya 'Shang-Chi' Trailer dị ebe a iji dobe gị na ihu